Kyrgyzistan, Fampahalalam-baovao Torian’ny Mpampanoa Lalàna ho Manevateva ny Filoha · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Marsa 2017 14:52 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, English, Ελληνικά, Français, English
Filoha Kyrgyz Almazbek Atambayev (ankavia) nihaona tamin'ny filoha Rosiana Vladimir Putin. Sary ofisialin'ny governemanta Rosiana, nomena lisansa ho azo ampiasaina indray.
Ity manaraka ity dia lahatsoratra fiarahamiasa avy amin'ny EurasiaNet.org. Nahazoana alalana ny famoahana azy indray.
Nilaza i Dina Maslova tonian-dahatsoratry ny Zanoza.kg, fa azo antoka toa hanatsara ny lazan'ny media fa tsy ny an'ny filoha ity raharaham-pitsarana ity. Ny olana lehibe dia tsy maintsy handany vola be ny tranonkala amin'ny ezaka fiarovana ny tombontsoany ara-barotra raha tokony hifantoka amin'ny tati-baovao, hoy i Maslova tamin'ny EurasiaNet.org.
17 ora izayAzerbaijan